महारानी भिक्टोरियाको डायरीमा जंगबहादुरको बेलायत यात्रा
श्रीभक्त खनाल मंगलबार, वैशाख १४, २०७८, ०७:०४
भाइ बमबहादुरलाई अख्तियारी दिएर जंगबहादुर राणा बेलायत जाने भए। उनीसहित ४१ जनाको टोलीले १५ जनवरी १८५० मा काठमाडौं छाड्यो। बेलायत जानका लागि भारत पुगेको भ्रमण दल ‘हेडिङटन’ नामको पानीजहाज चढेर कलकत्ताबाट ७ अप्रिल १८५० का दिन बेलायत रवाना भएको थियो।
हेडिङटन सन् १८४८ मा करिब ६२ हजार पाउण्ड खर्च गरेर यात्रु र सामान बोक्नका लागि बेलायती कम्पनी ‘भर्नन थोमस एण्ड सन्स’ले बनाएको पानीजहाज थियो। ‘दि पेनेन्सुलार एण्ड ओरियण्टल स्टीम नेभिगेसन कम्पनी’को स्वामित्वमा रहेको यो पानीजहाजले भारतबाट चिठीपत्र र सामान ओसार्थ्यो। poheritage.comमा राखिएको हेडिङटनको ‘फ्याक्ट सिट’ अनुसार यो प्रतिघण्टा १९.४४ किलोमिटरका दरले चल्थ्यो ।
कलकत्ताबाट इजिप्टसम्म पुग्न यो भ्रमण दलले त्यसबेला ५ हजार पाउण्ड भाडा तिरेको थियो। पानीजहाजमा जंगबहादुरको टोलीका अलावा अन्य यात्रु, सरसामान र जनावर पनि थिए। मानिसको संख्या करिब १२ सय थियो।
‘कोही बन्दुकको तारा हांछन्, कोही किताप पढछन्, कोही कौसिमा बसि हावा षांछन्, कोही देसदेसका कुरा कथा, शास्त्रका कुरा कीताब हेर्छन्। बाह्र सये मानिस तेस जाहाज्मा रह्याका छन्, आफ्ना काम गर्छन् ।’ (जंगबहादुरको बेलाइत यात्रा, प्रकाशक– मदन पुरस्कार पुस्तकालय, प्रकाशन मिति– वि.सं. २०१४, सम्पादक कमल दीक्षित, पृष्ठ ६)
जंगबहादुरले भन्सारमा तरबार झिकेपछि...
कलकत्ताबाट हिँडेको टोली मद्रासको चिनापट्टनम् हुँदै सातौं दिनमा लंका (श्रीलंका) पुग्यो। लंकाबाट हिँडेको आठौं दिनमा उनीहरू एडन (Aden) पुगे। यो ठाउँलाई हाल यमन भनिन्छ। एडनबाट हिँडेको आठौं दिनमा उनीहरू सोएज बादशाहको मुलुक (suez emperor) पुगे। यो अहिलेको इजिप्टलाई भनिएको हो। सोएजमा एक दिन आराम गरेपछि टोली फरोजा (faroja) नामको स्टिमर चढेर इजिप्टकै अर्को शहर आलेकजण्ड्रिया पुग्यो। आलेकजण्ड्रियाबाट ‘रिपोन’ पानीजहाज समातेर उनीहरु अघि बढे। आलेकजण्ड्रिबाट हिँडेको सात दिनमा जंगबहादुरको टोली माल्टा पुग्यो। माल्टाबाट हिँडेको ६ दिनपछि टोलीले जिब्राल्टर टेक्यो। जिब्राल्टरबाट हिँडेको ४ दिनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल बेलायतको साउथह्याम्पटन बन्दरगाह पुग्यो। त्यो दिन थियो, २५ मे १८५०।
रिपोनको क्याप्टेन रोबर्ट मोरेस्बी थिए जो इष्ट इण्डिया कम्पनीको ‘इण्डियन नेभी’मा आवद्ध सैनिक थिए। जंगबहादुर राणाको टोलीको आगमनलाई लिएर २७ मे १८५० मा बेलायती अखबार ‘मर्निङ पोष्ट’मा यस्तो समाचार छापिएको थियोः
‘भारतबाट धेरै चिठीपत्र बोकेर आइतबार बिहान सात बजे रिपोन आइपुग्यो। जहाजका १६६ यात्रीमध्ये १०१ फर्स्ट क्लास डेकमा थिए जसमा नेपालका महामहिम जंगबहादुर राणाजी पनि थिए। उनी नेपाल अधिराज्यका प्रधानमन्त्री तथा कमाण्डर इन चिफ पनि हुन्। नेपाल तिब्बतको बोर्डरमा पर्छ।’
साउथह्याम्पटन भन्सारमा जंगको टोली र भन्सार अधिकृतहरुबीच केहीबेर गलफत्ती भयो। कारण थियो- नेपालबाट ल्याइएका सामानको भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने कुरा र जाँच प्रक्रिया। भन्सार अधिकृतले रानी भिक्टोरियालाई ल्याइएको सामान जाँच नगर्ने तर, नेपाली दलले ल्याएको सामान आंशिक जाँच गर्ने निर्देशन पाएका थिए। बेलायत भ्रमणमा आउने पहिलेका अन्य कूटनीतिज्ञहरुलाई उनीहरुले यसो गर्दै आएका रहेछन्।
‘भन्सार अधिकृतहरुले पहिले मालसामान नखोल्ने आदेश पाएका थिए। तर, पछि जंगले ल्याएको सामान पनि खोल्नू भन्ने आदेश पाएपछि उनीहरुले भन्सार शुल्क लगाउने हेतुले टोलीलाई सामान खोल्न भने। भन्सारको व्यवहारमा टोली सहमत भएन। जंगले ६ जना नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई सामान हेर्ने आदेश थिए। म्यानबाट तरबार झिके र घोषणा गरे कि यदि कसैले यी सामान छुन्छ भने उनी अर्को स्टीमर लिएर फ्रान्स जानेछन्। भन्सार अधिकृतले माथिका अधिकारीलाई समस्या उत्पन्न भएको बताएपछि केही टेलिग्राम आदानप्रदान भए, समानहरु नखोली छाडिए।’ (Life of Jung Bahadur, Pudma Jung Bhaddoor Rana, Page 125, Pioneer Press, Allahabad, 1909)।
पानीजहाजमै दाउरा बालेर भान्सा
रिपोनले इजिप्टबाट साउथह्याम्टन आउँदा एउटा हिप्पोपोटामस पनि लिएर आएका थिए। बेलायतलाई इजिप्टका शासक अब्बास पासाले सो जीव उपहार दिएका थिए। ‘जहाजको अघिल्लो भागमा नेपाली दल काठबाट बनेको चुलोमा खाना बनाइरहेको थियो जुन जहाजको लागि खतरा हुन सक्थ्यो। उनीहरू केही हाउभाउकासाथ यात्रा गरिरहेका थिए जसको खर्च २० हजार पाउण्ड थियो। उनीहरु आफ्नो धर्म (हिन्दू) मान्ने बाहेक अरुले छोएको खाँदैनथे। अरुसँग छोइछिटो होला भनेर तिनीहरुले जहाजको अघिल्लो भाग बुक गरेका थिए जहाँ भान्सा थियो। माटो र बालुवाले भरिएको चारपाटे चौका बनाएका थिए। उनीहरुको इन्धन कोइला थियो।
पानीजहाजको एक कुनामा सिंह, चितुवा, दुई जंगली सुँगुर, दुई पेलिकन हाँस, दुई गजेला (कृष्णसार), तिन चिल, दुई लाइनक्स (हेर्दा बिरालो जस्तो देखिने), दुई मस्क क्याट (एक प्रकारको जंगली बिरालो), दुई इबिक्स प्राणी, प्रशस्त बाख्रा, कंगारु र्‍याटस् नामको प्राणी, जंगली बिरालो र थुप्रै सर्प अनि छेपारा थिए। विभिन्न प्रजातिका अरेबियन घोडा, इजिप्सियन प्रजातिका बिराला र दुई सपेरा पनि जहाजमा थिए जसले हिप्पोपोटामससँगै यात्रा गरे।’
(अब्बासः अ हिप्पोपोटामस इन भिक्टोरियन लण्डन, सिमोन्स जोन, पृष्ठ ५०–५१, एनिमल पब्लिक्स, २०१९।)
बेलायतका दैनिक र साप्ताहिक अखबारहरुले हिप्पोपोटामस र जंगबहादुर दुवैको चर्चा गरेका छन्। ‘इलस्ट्रेड लण्डन न्यूज’ लगायतका पत्रिकाहरुले यसरी समाचार दिएका थिए-
‘डेढ वर्ष उमेरको हिप्पोपोटामस, जुन नाइल नदीमा समातिएको थियो, त्यो जनावर र जंगको टोली साउथह्यामटनमा ट्रेन पर्खेर बसेको छ। विशेष ट्रेनमार्फत् हिप्पोपोटामस लण्डनको रिजेण्टस् पार्कस्थित जुलोजिकल गार्डेन लगिँदैछ भने जंग सेण्ट्रल लण्डनको ‘वाटर लु’ स्टेशन जाँदैछन्। वाटर लुबाट उनीहरुलाई बेलायत सरकारले बस्न ब्यवस्था गरेको घर ‘रिचमण्ड टेरेस’ जान पैदल करिब १५ मिनेट जानुपर्छ।’रिचमण्ड टेरेस हाल अस्तित्वमा छैन। थेम्स नदीकिनारमा रहेको यो ठाउँमा हाल बेलायतको रक्षा मन्त्रालय रहेको छ। (हे. रिचमण्ड टेरेसको तस्वीर)
भिक्टोरियाको डायरीमा जंगबहादुर
१८ वर्षको उमेरमा रानी बनेकी बेलायती महारानी भिक्टोरिया जीवनका महत्वपूर्ण घटना आफैंले डायरीमा टिप्थिन्। उनी फ्रेञ्च भाषामा पोख्त थिइन्। जंगबहादुर बेलायत पुग्दा भिक्टोरियाको शासन १३औं वर्षमा चलिरहेको थियो। महारानीले लेखेका ४५ वटा डायरी उनको निधनपछि कान्छी छोरी बियात्रिसले सारिन्। जंगबहादुर बेलायत पुग्दा भिक्टोरया ‘विण्डसोर क्यासल’ मा रहिछन्। यो दरबार लण्डनबाट करिब ३८ किलोमिटर टाढा पर्छ। हिप्पोपोटामस र जंगबारे रानीले १० जुन १८५० मा गरेको टिपोटको भावानुवाद यस्तो छ-
‘अलेक्जान्ड्रियाबाट एम.मुर्रे बेलायत फर्केका छन्। उनी त्यहाँ कन्सुल जनरल थिए। उनले भर्खरको हिप्पोपोटामस पनि साथै लिएर आएका छन्। भनिए अनुसार यो हिप्पोपोटामस रोमनको समयपछि पहिलोपटक बेलायत ल्याइन लागिएको हो। अहिले यसलाई जुलोजिकल गार्डेनमा राखिएको छ। नेपालका राजदूत र उनका सहयोगीहरु पनि सोही जहाजमा बेलायत आएका हुन्।’ (क्वीनभिक्टोरियाजर्नलस् डट ओआरजी।)
८ जुन १८५० मा दि इलस्ट्रेटेड लण्डन न्यूज’ को प्रथम पृष्ठमा छापिएको जंगबहादुरको पोट्रेट। पोट्रेट बेलायती कलाकारले बनाएक हुन्। स्रोतः ब्रिटिश लाइब्रेरी आर्काइभ
साउथह्याम्टन पुगेको टोली त्यो दिन त्यहीँ बस्यो। भोलिपल्ट टोलीले राजधानी लण्डनमा बस्ने व्यवस्था बुझ्नका लागि लेफ्टिनण्ट लालसिंह खत्री र क्याप्टेन क्याभनागलाई लण्डन पठाउने भयो। नेपालबाट हिँडेको जंगको टोली भारत पुगेपछि त्यहाँको इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारले क्याभनागलाई दोभाषेको रुपमा भ्रमण टोलीमा समावेश गराएको थियो।
‘हामी आउला तीमीहरु अ‍ैल्हे रेलगाडामा चढिजाउ, वांह सर्कारलाई डेरा षटायाको भया हेरि षबर ल्याउनु नषटायाको भया यक असल घरको ठेकान गरि आउनु।’ (जंगबहादुरको बेलाइत यात्रा, सम्पादक कमल दीक्षित, पृष्ठ १४)
बेलायत जाँदाजाँदै बाटोबाटै फर्काइएको माथवरसिंहको टोली
मुख्यितार भीमसेन थापाको पालामा सन् १८१३ मा अंग्रेजसँग निकट हुने नीति अवलम्वन गर्न माथवरसिंह थापाको नेतृतवमा एउटा टोली बेलायत जान हिँडेको थियो। त्यसमा जंगबहादुर पनि कान्छो सदस्यको रुपमा समावेश थिए।
‘मिसन कलकत्ता पुगेपछि त्यहाँका एक्टिङ गभर्नर जनरल चार्ल्स थियोफिलस मेटकाफले उनीहरुको स्वागत गरे। नेपालसँग इष्ट इण्डिया कम्पनीले गर्ने भनिएको व्यापारिक सन्धिमा मतभिन्नता भएपछि र नेपालस्थित ब्रिटिस रेजिडेन्टमार्फत् नभई सिधै बेलायतका सम्राटसँग सम्पर्क राख्ने उद्देश्य नेपाली मिसनको रहेको पाएपछि उनीहरुलाई बेलायत जान रोकियो। उपहार र खलितापत्र चार्ल्स आफैंले बुझेर बेलायत पठाइदिने बताएपछि नेपाली मिसन त्यहीँबाट फर्कन बाध्य भयो।’ (गंगा कर्माचार्य हाडा, सिनास जर्नल, भोल्युम २७, नम्बर २, पृष्ठ २७२, जुलाई २०००)
बेलायत जान भनी हिँडेको माथवरसिंहको टोलीले ४ लाख रूपैयाँ लिएर गएको थियो। बेलायत जान नपाएपछि टोलीले त्यो पैसा राजा जस्तो तरिकाले मोजमजा गरेर खर्च गर्‍यो। (डा. विश्व पौडेल, इतिहासमा अर्थ, नेपाल लिटरेचर फेस्टिबल पोखरा, २०१७)